लगानीकर्ता आशावादी हुँदा ५.९९ अंकले बढ्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण लगानीकर्ता आशावादी हुँदा ५.९९ अंकले बढ्यो नेप्से
on: March 17, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
लगानीकर्ता आशावादी हुँदा ५.९९ अंकले बढ्यो नेप्से
चैत ३, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो तथा चैत महीनामा कारोबार भएको शुरुको दिन नेप्से ५ दशमलव ९९ अंकले बढेर १ हजार १६१ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १५५ दशमलव ४० विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक बढेर १ हजार १६५ दशमलव ३० विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
सोपछि बजार अन्यसम्म दुई तीन अंकले मात्र घटबढ भएको हो । दश समूहको परिसूचकमा होटल, विकास र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से बढ्न पुगेको हो ।
यसदिन वित्त समूहको र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न पुगेको छ । केहि समय अघि निरन्तर नेप्से घटिरहँदा मनोवल गुमाएका लागनीकर्ताहरु हालको नेप्से बढाइले आशावादी भएका छन् । चैत १५ र १६ गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनको कारण पनि नेप्से बढ्न सघाउ पुगेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको आयोजना परियोजनाका साथै पूँजी बजारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले हुन लागेको सम्मेलनले पूँजी बजारमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पूँजी बजारमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरु ल्याउने कुरा गरेकाले सम्मेलनले यसमा सघाउ पुग्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।
आइतवार रू. ३७ करोड १२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलानमा कारोबार रकम रू. ११ करोड ४६ लाख घटेको हो । बिहीवार रू. ४८ करोड ५८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव शून्य ८ अंकले बढेर २ सय ४७ दशमलव १७ विन्दुमा पुगेको छ ।
आशा र युनाइटेड फाइनान्सको शेयरमा सर्किट ब्रेक
आइतवार आशा लघुवित्तको शेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेक लागेको छ । हालै नेप्सेमा आईपीओ सूचिकृत भएकाले कम्पनीको शेयरमा माग बढेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ३६ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. ४०२ मा कारोबार भएको छ । साथै, युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १७ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १९५ मा कारोबार भएको छ । तिनाउ विकास बैंकको शेयर मूल्य ६ दशमलव ७१ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १६६ मा कारोबार भएको छ ।
सर्वाधिक कारोबार हुनेमा कुन कम्पनी ?
कारोबार भएका १ सय ७२ कम्पनीमा ८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६१ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २४ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्टको संस्थापक तर्फको शेयर सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २३० मा रू. ४ करोड ४६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।